Dagaallo khasaare badan dhaliyay oo magaalada Sancaa ee Yaman ku dhexmaray Xuuthiyiinta iyo malleeshiyaadka Cali Cabdalla Saalax. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dagaallo khasaare badan dhaliyay oo magaalada Sancaa ee Yaman ku dhexmaray Xuuthiyiinta iyo malleeshiyaadka Cali Cabdalla Saalax.
On Nov 30, 2017 969 0
Wararka ka imaanaya dalka Yaman Ee Jaziiradda carabta ayaa sheegaya in magaalada Sancaa ay marti gelisay dagaallo xoogan oo dhexmaray malleeshiyaadka shiicada Xuuthiyiinta iyo kuwa Cali Cabdalla Saalax ee kuwada sugan magaalada.
Dagaalka ayaa billowday kadib markii malleeshiyaadka Xuuthiyiintu damceen iney la wareegaan masjid lagu magacabo Al-Salaax oo ah masjidka ugu weyn guud ahaan dalka Yaman, kaas oo ay gacanta ku hayaan malleeshiyaadka Cali Cabdalla Saalax.
Xuuthiyiinta ayaa doonaya iney la wareegaan masjidka si ay ugu qabsadaan waxay ugu yeeraan dabaaldega dhalashada Nabi Muxamed SCW ee bidcada ah, waxaana arinta ah la wareegitaanka masjidka ka horyimid ciidamadii ku sugnaa.
Dagaal ayaa goobta ka dhacay, waxaana dhanka malleeshiyaadka Cali Saalaga laga dilay 5 Ruux, halka Xuuthiyiintana laga dilay 9 askari oo uu ku jiro sarkaal sare.
Afhayeen u hadlay xisbiga Cali Cabdalla Saalax ayaa eedeyn usoo jeediyay Xuuthiyiinta isagooona ku sheegay inaaney ixtiraameynin dadka ay bahwadaaga yihiin.
Magaalada Sancaa ayaa kamid ah magaalooyinka ku jira gumeysiga Xuuthiyiinta Rawaafida ah, dhowr sano oo xiriir ah, waxaana dhibaatooyin nooc weliba leh la kulmaya dadka Muslimiinta Ahlu Sunnaha ee halkaas degan.